inverter task motor variana hafainganam-pandeha AC Inverter Drive
AC inverter duty drive motor variana hafainganam-pandeha
New Motor Inverter môtô
Mpanome vaovao, mpanondrana ary mpaninjara ny môsatram-pandehan'ny IEC inverter, Global Speed ​​Inverter motor
Inverter adiresy motor
Tanjona ankapobeny sy adidy Inverter
Ny motera inverter dia adidy vaovao kokoa izay nanjary nilaina
satria ny motera dia nanomboka natosiky ny VFD (inverters na AC drive). motera iec inverter, maro ny mpamily fahita matetika no niavaka noho ny karazana inverter circuitry ampiasaina ao amin'ny VFD. Moto inverter 100 hp, moto inverter-adiresy dia foto-kevitra vaovao kokoa izay nanjary nilaina satria nanomboka nateraky ny VFD ny motera. motera adiresy inverter tokana, herinaratra indostrialy Motors azo alaina amin'ny fampiharana sy fomba fiasa amin'ny ankapobeny. Na izany aza, ny fampiharana AC Variable Speed ​​hafa dia mitaky haingam-pandeha tsy tapaka.
Karazana AC Motors
Ny motera herinaratra indostrialy dia azo alaina amin'ny fampiharana sy fomba fiasa amin'ny ankapobeny.
Fampidirana misimisy kokoa
Raha misy anao ireo vokatra ireo dia mifandraisa aminay! Vonona ary manantena ny fiaraha-miasa izahay. Raisinay ho kalitao ny tombony ary ny vidiny ambany indrindra amin'ny fahatsoram-po. Ny mpamily haavo miovaova (VFD) dia karazana mpanera môtô izay mitondra maotera mandeha amin'ny herinaratra amin'ny alàlan'ny fanovana ny hatetika sy ny tanjaky ny herinaratra ao aminy. Ny kinova Washdown sy Paint-Free an'ny motera AC Inverter Drive dia natao ho an'ny hafainganam-pandeha azo ovaina.
Momba anay & serivisy
Ho an'ny Inverter Motor
Tokana amin'ny dingana telo VFD Ny fomba mora vidy dia ny fividianana kapila miovaova matetika (VFD) dingana iray hamita ilay asa. Power inverter Power Wr 3000's Watt dia manasongadina ny teknolojia tsy misy tariby Bluetooth miaraka amina interface interface APP ahafahanao manamboatra endrika mora foana. Ny motera inverter dia adidy vaovao kokoa izay nanjary nilaina satria ny motera dia nanomboka natosiky ny VFD.
Mifandraisa aminay izao.